TSCM, mutengesi weApple, ichavaka kusvika kumasekesi matanhatu muArizona (USA) | Ndinobva mac
Iyo Taiwanese multinational semiconductor kontrakiti dhizaini uye yekugadzira kambani, iri imwe yemakambani makuru muTaiwan uye imwe yeanonyanya kukosha pasirese, ichavaka mafekitori matsva muArizona. TSCM yakatozivisa gore rapfuura kuti yaida kuzvisimbisa muGrand Canyon State. Asi mishumo mitsva inoratidza kuti ichave isiri chete chikamu chinogadzirwa asi kuti pane kutaura nezvazvo kusvika pamatanhatu.
Maererano nemishumo, el Apple's M uye A akateedzana TSMC chip inogadzira inoronga kuvaka zvinopfuura chete iyo chete yakaziviswa chip fekitori muUnited States. Kunyanya muguta reColorado Canyon, Arizona. Muna Chivabvu 2020 zvakataurwa kuti kambani ichavaka $ 12.000 bhiriyoni fekitori mudunhu. Iyo nzvimbo inotarisirwa kutanga kugadzirwa kwevhoriyamu muna 2024.
Vatatu masosi vanoziva nezvenyaya iyi, avo vakataura nemamiriro ekuti varege kuzivikanwa sezvo vaive vasina mvumo yekutaura kuvatori venhau, vakaudza Reuters kuti mamwe mafekitori mashanu ari kurongwa. Izvo hazvisi pachena kuti iyo yekuwedzera yekugadzira uye yekudyara kugona ingangove iri ivo vaigona kumiririra aya mamwe mafekitori uye kuti ndeipi michina yekugadzira chip yavaizoshandisa. TSMC yakataura mwedzi wapfuura kuti yakaronga kuisa mari $ 100.000 bhiriyoni mumakore matatu anotevera kuwedzera kugona, kunyangwe isina kupa ruzivo.
Tichifunga nezvekushomeka kwechip kune makambani eetekinoroji izvozvi, nhau idzi dzinouya zvakanaka. Zvine musoro kwete zveiyi chaiyo nguva, asi ye zviitiko zvinotevera zvichaitika kune zviri kuitika izvozvi. Apple ichabatsira zvakanyanya nekuve nefekitori yekugadzira michina padyo uye ichakwanisa kudzikisa mari zhinji.
Zvakare chengetedza mupfungwa kuti hurumende yeBidid iri kugadzirira kushandisa makumi emabhiriyoni emadhora kutsigira kugadzirwa kwe machipisi epamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » TSCM, mutengesi weApple, ichavaka kusvika kumasekesi matanhatu muArizona (USA)